Activists protest French/Mugabe relations(01-02-07) - The Zimbabwean
Activists protest French/Mugabe relations(01-02-07)
LONDON - Campaigners are to protest outside of the French embassy here on Friday to urge the French government to stop representatives of the Zimbabwean government attending an international summit.
Union members, Zimbabwean exiles and human rights campaigners are joining protests outside
French embassies across Europe. They are calling on the French government to apply a European Union ban on Zimbabwean government members and prevent them from attending an African summit the French government is hosting in Cannes next month.
Amicus’ General Secretary, Derek Simpson, said: “The French government have allowed Mugabe to attend this summit in the past and we, and many thousands of people across Europe who are horrified by the atrocities being carried out in Zimbabwe, want to urge solidarity and for the European Unions banned list of people to be upheld. We need to send a clear and consistent message to the leaders of the Zimbabwe’s brutal regime: you are not welcome.”
Euan Wilmshurst, Director of Action for Southern Africa, said: “People should be under no illusion that state sponsored terrorism is being carried out in Zimbabwe. People are being starved and tortured by the regime and it cannot be right that Mugabe, or any other representative of the Zimbabwe government, should be allowed to sit down with African and French leaders at an international conference.”